भुक्तानीमा सेलपे सहज छ, बैंक... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, माघ ९
सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा आएको भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी सेलकम प्राइभेट लिमिटेडले गत साउनदेखि नेपाली बजारमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा ‘सेलपे’ ल्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सेलपे छोटो समयमै प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय बनिरहेको छ। यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलको पिनलेस ई–टपअप रिचार्ज सेवाल्याएको यो कम्पनीले अहिले डिजिटल भुक्तानीका विभिन्न सेवाहरु थप गरेर सेलपे सञ्चालनमा ल्याएको हो।
यसै सन्दर्भमा डिजिटल भुक्तानीको विषयमा सेलकम प्राईभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः
के हो सेलपे? अन्य डिजिटल पेमेन्ट र यसमा के फरक छ?
सेलपे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलकम प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित सेवा हो। यो अरु सेवाभन्दा फरक र सहज छ। यसमा ग्राहकले अरु सेवाहरुमा जस्तो वालेट बनाउनु पर्दैन। भुक्तानी गर्न वालेटमा पैसा तान्नु पनि पर्दैन। सेलपेमा ग्राहकले आफ्नो बैंक खाता नै लिंक गरी आफ्नो भुक्तानीहरु बैंक खातामार्फत् सिधै गर्न सक्छन्।
सेलपेबाट हुने भुक्तानी कत्तिको सुरक्षित छ?
हामीले सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाएका छौं। सेलपेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पिसिआई–डिएसएस सुरक्षा प्रणाली अपनाएको छ। डिजिटल पेमेन्ट इन्डष्ट्री प्रयोग हुने सुरक्षा मापदण्ड हामीले अवलम्बन गरेका छौं। हामीले ६/६ महिनामा हाम्रो सिस्टम अडिट र पेनिट्रेशन टेस्ट गराउने गरेका छौं।
यसमा के–के फिचर्स समावेश छन्? सेलपेका आगामी योजना के छन् ?
सेलपेबाट दूरसञ्चार सेवा, बिजुली, खानेपानी, टिभी, इन्टरनेटको महशुल भुक्तानी गर्न सकिन्छ। विभिन्न पसल, रेष्टुरेन्टकाे भुक्तानी गर्न सकिन्छ। एक बैंक खाताबाट अन्य बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण, स्वदेशभित्र गरिने मनी ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ। हाम्रो सेवा वास्तविक समय (रियल टाइम) मा हुने गर्दछ। हामी ग्राहकको आवश्यकताअनुसार नयाँ सेवा ल्याउने र उनीहरुलाई सन्तुष्टि पार्दै जानेछौं।
सेलपे नै किन?
ग्राहकले खोज्ने भनेको सजिलो, सस्तो र सुलभ सेवा नै हो। सेलपे नै किनभने यसमा वालेट बनाई त्यसमा पैसा राखिरहनु पर्दैन।
आफ्नो बैंक खाताबाटै सबै भुक्तानीहरु गर्न सकिन्छ। घरमै बसेर सेलपेको सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ। रियल टाइममै ट्रान्जेक्शन हुने भएकाले मर्चेन्ट वा ग्राहकले तुरुन्तै पैसा पठाउन र पाउन सक्छन्।
डिजिटल पेमेन्टका क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन्?
चुनौतीहरु छन्, ग्राहकलाई यस्ता सेवा कसरी एडप्ट गराउने भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं। विस्तारै सर्वसाधारणमा टेलिफोन, बत्तीको बिल तिर्न, सिनेमाको टिकट काट्न वा टिभी, इन्टरनेटको बिल तिर्न काउन्टरमै गएर लाइन लाग्नु पर्दैन भन्ने सोच पलाएको छ। समयानुसार विस्तारै परिवर्तन हुंदै जान्छ।
सेलपे कुन–कुन बैंकसँग जोडिएको छ?
हाल हामी १६ वटा बैंकसँग जोडिएका छौं। ती सेन्चुरी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, मेगा बैंक, नेपालबंगलादेश बैंक, एनसिसी बैंक, नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, प्राईम बैंक, देवःविकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक तथा आईसिएफसी फाइनान्स छन्। साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि आवद्ध हुने क्रममा छौं।
अन्त्यमा ग्राहकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
सेलपे सहज र सजिलो छ। सम्पूर्ण कारोबारहरु बैंक खातामार्फत नै हुने हुँदा यो सुरक्षित एवं पारदर्शी छ। यसमा ग्राहकको पैसा कतै होल्ड हुँदैन। कथंकदाचित कारोवार सफल हुन नसकेको खण्डमा पनि ग्राहकको रकम पुन निजकै बैंक खातामा तुरुन्तै फिर्ता हुन्छ।
मर्चेण्टहरुको हकमा कार्डबाट भुक्तानी भएको रकम प्राप्तगर्न एक, दुईदिन लाग्छ भने हाम्रो सेवामा तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै, कार्डबाट भुक्तानी प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क पनि चर्को छ जुन हाम्रो सेवामा अत्यन्त न्युन छ।
डिजिटल पेमेन्टको महत्व र प्रभावकारिता बढ्दै गरेको यो सन्दर्भमा हामी सबैका लागि डिजिटल पेमेन्टको सारथी बन्न चाहन्छौं।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ९, २०७६, १३:५५:००